Kuzosimama umnotho nge-Formula 1 | Scrolla Izindaba
Kuzosimama umnotho nge-Formula 1
Ngokubuya kwe-Kyalami Circuit ye-Formula 1 umnotho wakuleli ungase usimame kakhulu.
Isikhulu esiphezulu se-Formula 1 uStefano Domenicali uvakashele elakuleli ngezingxoxo mayelana nokubuyisa lo mdlalo okokuqala kusukela ngonyaka ka-1993.
Kulandela i-Canadian Grand Prix, uDomenicali kuthiwa ubekhuluma nabo bonke abaphathi beqembu mayelana nekhalenda lomjaho ka-2023.
Imibiko iveza ukuthi i-Grand Prix yakuleli ingase ibuye ngonyaka ozayo ngemuva kokususwa kwe-Russian Grand Prix.
Ukuqinisekiswa kwesivumelwano kungenzeka kukhishwe kusasele izinyanga. Kodwa uma kuqinisekiswa lolu daba lokhu kungawufukula kakhulu umnotho wakuleli.
Umnikazi we-Kyalami Circuit, uToby Venter uthe izinzuzo zezimali kuleli zizoba nkulu.
“Inhlangano engasebenzisa yonke imihlomulo yezezimali kumqhudelwano wamazwe ngamazwe walolu hlobo lomnotho elakuleli,” etshela i-Sport24.
“Lokhu kuletha amathuba omsebenzi, imali efakwa emnothweni, kanye nezokuvakasha ziyathuthuka. Yize uhulumeni engeke azibandakanye ngqo ngaphandle kwezindaba zokulawula, ama-visa, ezokuthutha, ukugunyazwa ukungena kuleli nokunye okuzosimamisa kakhulu umnotho kuphinde kulethe nenzuzo enkulu yezezimali.”
Ngaphezu kwalezi zinzuzo zezimali ezingaba khona, isivumelwano sokusakaza sizokwengeza emalini eyenziwe ngempelasonto yomjaho.
Uhulumeni akahlangene ngqo nokwenza isivumelwano, kodwa ukuqinisekisile ukuthi bazofaka isandla ezindlekweni uma kungavunyelwana.
Nokho ukuze sisingathe umjaho we-Formula 1 i-Circuit ye-Kyalami idinga ukuthuthukiswa isuka esimweni sayo sesigaba sesibili iya esigabeni sokuqala.
I-Formula 1 Grand Prix izodala amathuba okwenza izigidigidi zamarandi. I-Grand Prix ebise-Texas phakathi kuka-2012 no-2015 yenze isamba esilinganiselwa ku-R54 billion.
Impelasonto ngayinye yomjaho iyahluka imali engenayo, kodwa inzuzo idlula izindleko ezisuke zisetshenzisiwe.
Umthombo wesithombe: @TheRace